Intlanzi emnyama yoKrebe | Ngeentlanzi
EL Intlanzi yeBicolor Labeo, ekwaziwa njenge ntlanzi yookrebe abamnyama, igama lazo lenzululwazi nguEpaizeorhynchos bicolor, osapho lweCyprinidae lweentlanzi, zihlala kwimilambo yeentaba zasemazantsi mpuma kwilizwekazi laseAsia.
EL intlanzi emnyama ekrebe, iphawuleka ngokuba nomzimba omde kunye noxinaniso oluncinci kumacala ayo, uneentshebe ezimbini emlonyeni wayo. Banomphetho womqolo apho bafumana khona igama lokrebe, kuba isikhumbuza esi silwanyana. Ezi ntlanzi ziyi-bicolor: zinomphetho obomvu obomvu krwe nomsila obomvu, ngelixa umzimba uphela umnyama ngokupheleleyo, ukuze zaziwe njengookrebe onomsila obomvu. Nangona kunjalo, kukho nolunye uhlobo lwale ntlanzi, elinomzimba omhlophe ngokupheleleyo onotshintsho lubomvu.
Njengezinye iintlanzi, ezi ukrebe obomvu-onomsila, Banikezela nge-dimorphism yesondo, oko kukuthi, abantu ababhinqileyo banobunkunkqele kwaye banobukhulu obukhulu kunamadoda, nangona kwimbala bahlala bathambile.
Ukuba ucinga ukuba nolu hlobo lwentlanzi kwi-aquarium yakho, kubalulekile ukuba ukhathalele ngokukodwa ubushushu bamanzi, kuba kufuneka igcinwe phakathi kwe-23 kunye ne-27 degrees Celsius. Ngokufanayo, kwifayile ye- umgangatho wobomi bezilwanyana zakho zamachibi ingaphezulu kakhulu, itanki leentlanzi kufuneka libe nezityalo ezininzi ezinokuthi zisebenze njengendawo yokufihla ukuze zikwazi ukucacisa indawo ezihlala kuyo, ezi ntlanzi zinobungakanani bendawo, ngakumbi iintlanzi zohlobo olunye. Ndikwacebisa ukuba wazise amatye kunye neengcambu kwaye kwangaxeshanye ushiye indawo eyaneleyo yokuba iintlanzi zidade ngokukhululekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Intlanzi emnyama yoKrebe